Midowga Yurub oo joojinaya lacagihii kaalmada ahaa ee dibedaha uga iman jirey masaajidda & macaahidda Muslimiinta. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Midowga Yurub oo joojinaya lacagihii kaalmada ahaa ee dibedaha uga iman jirey...
Midowga Yurub oo joojinaya lacagihii kaalmada ahaa ee dibedaha uga iman jirey masaajidda & macaahidda Muslimiinta.
Walwaal Online; (Brussels) 13 Nof 2020 – Midowga Yurub ayaa ku tala jirta in la dhimo fursadihii maalgelineed ee ay ururrada diimeed ka heli jireen dibedaha, sida laga filayo kulan ay maanta khadka ku yeelanayaan Wasiirrada Arr. Gudaha ee dalalka Midowga Yurub, taasoo jawaab u ah weerarradii argagixiso ee ugu dambeeyey, sida loo dhigay.
Previous articleSiyaasiyiin Denish ah oo doonayey inay gubaan quraanka kariimka ah isu soo bax ka dhacayey brussels.
Next articleRuushka & Shiinaha oo la caroodey in cunaqabataynta hubka laga qaado Somalia iyo Maraykanka oo qiray sababta Somalia loogu hayo.